Araga ummuliso ama dhakhtarka haweenka muddada uurka | Zanzu
La samee ballan ummulisada ama dhakhtarka haweenka si loo xaqiijiyo uurkaaga.
Haddii aad uur leedahay, dhakhtar ama dhakhtarka haweenka waxa uu ka warhayn doonaa adiga iyo uur jiifka muddada uurkaaga oo dhan.
Dhakhtar ka qaadaya muunada dhiiga haweenay si uu u hubiyo haddii ay uur leedahay.
Baadhitaano caadi ah
Baadhitaanka koowaad, ummulisada ama dhakhtarka haweenka waxa uu:
Waydiiyaa su'aalo adiga kugu saabsan, lamaanahaaga, qoyskaaga, uurarkii hore iyo taariikhda muddada dhiiga caadadaada u dambaysay si uu u ogaado wax badan oo ku saabsan uurkaaga.
Wakhtiyada qaarkood waxa uu samayn doonaa altarasoonka si uu u xaqiijiyo uurkaaga;
Hubi miisaankaaga iyo cadaadkiska dhiiga;
Kugu wargeliyaa adiga baadhitaano dheeraad ah aad qaadan karto si aad u hubiso haddii ilmahu uu leeyahay koromsoomyo aan caadi ahayn ama jidh aan caadi ahayn oo koromsooyada aan caadiga ahayn ama kuwa kale oo jidhka aan caadiga ahayn ah. Waalidku waxay doortaa haddii ay doonayaan baadhitaanada ama aanay doonayn.
Muddada baadhitaanada dambe, ummulisada ama dhakhyarka haweenku waxay:
Waydiin doonaan sida aad tahay oo waxay ka jawaabi su'aalaha haddii aad waxuun hayso
Hubi miisaankaaga iyo cadaadkiska dhiiga
Baadh koriinka ilmaha oo dhegayso garaaciisa wadnaha
Bixi macluumaadka ku saabsan uurka iyo ummulida
Bilahii u dambeeyay ee uurka, meesha ilmahaaga gudaha ilma galeenka waa la baadhi doonaa.
Ummulisada ama dhakhtarka haweenka waxa uu fuliyaa ugu yaraan sawirka altarasoonka muddada uurka.
La xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka
Waxaa jira xaalada aad u baahantahay inaad la xidhiidho ummuliso ama dhakhtarka haweenka (isla markaaba), gaar ahaan haddii:
waxaad u dhacday calooshaada;
waxaad dareentay xanuun wayn oo calooshaada ah;
waxaad leedahay xumad joogta ah;
waxaad lumisay dhiig ka yimid siilka;
waxaad lumusay miisaan badan;
waxaad lumisaa dheecaanka uur jiifta ku xeeran;
wax badan oo dheecaanka siilka ah oo ur xun leh ayaa leedahay;
si cad uma dareemi kartid ilmaha oo dhaqaaqaya 26 todobaad ka dib;
Waxaad yeelataa isku soo ururka muruqa ilma galeenka caadiga ah;
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka xaalada gurmadka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad u dhacdo calooshaada.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad xanuun culus ka dareento calooshaada.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad leedahay xummad joogta ah
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii dhiig kaa yimaado siilka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii miisaan badan kaa dhaco.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad dheecaan kaa yimaado siilka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka
Dagaalka lamaanaha muddada uurka
Dagaalka lamaanaha waa qaab kasta oo dagaala oo u dhexeeya 2 qof oo xidhiidh ka dhexeyo. Dagaalka lamaanaha waxaa mamnuucay sharciga.
Dagaalka lamaanaha muddada uurka waxay sababi kartaa dhibtaatooyinka caafimaadka labbada hooyada iyouur jiifka. Dhibaatooyinku waxay noqon karaa kuwa jidhka ah iyo kuwa nafsiyeed. Tusaale ahaa: walbahaar, dhiig bax, cadaadiska dhiiga oo sareeya, dhimashada ilmaha oo wakhtigeeda ka soo hormarta, miisaanka dhalashada oo aad u hooseya, qubashada uurka.
Waydii ummulisadaada, dhakhtarka haweenka ama dhakhtarka guud caawimo haddii aad la kullanto dagaalka lamaanaha muddada uurka.
Gurmadkana, wac 112.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Araga ummuliso ama dhakhtarka haweenka muddada uurka
Daryeelida muddada uurka
Helitaanka daryeelka caafimaadka
Gudbinta cudurada ka imanaya hooyada ilaa uur jiifta.